साम्राज्ञीले गरिन् आँट: भुवन केसीको भित्रि कर्तुत गरिन प्रदाफास (भिडियो) – News Np Online
मुख्य पृष्ठ /Intresting/साम्राज्ञीले गरिन् आँट: भुवन केसीको भित्रि कर्तुत गरिन प्रदाफास (भिडियो)
साम्राज्ञीले गरिन् आँट: भुवन केसीको भित्रि कर्तुत गरिन प्रदाफास (भिडियो)
नेपाली फिल्म क्षेत्रमा पनि नायीका साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहले पनि अग्रजले नयाँ कलाकारलाई गर्ने ब्यवहारका वारेमा वहस सुरु भएको छ । नायीका साम्राज्ञीले सामाजिक सञ्जाल फेसवुकमा एउटा स्टाटस लेखेपछि सुरु भएको आरोप प्रत्यारोपले अहिले अर्कै मोड लिएको छ । साम्राज्ञीले लेखेको एउटा स्टाटसमा प्रतिकृया जनाएका अघिल्लो पुस्ताका कलाकार तथा फिल्म निर्माता भुवन केसीलाई नै महंगो सावित भएको छ ।
साम्राज्ञीले भुवन केसीले आफुलाई दु’ब्र्य’वहार गरेको आरोप लगाएकी छन् । उनले आफुलाई नेपाली फिल्म क्षेत्रप्रति विति’ष्णा जाग्नुको कारण भुवन केसी भएको बताएकी छन् । तीन दिनअघि अभिनेत्री शाहले इन्स्टाग्राममा भिडियो सार्वजनिक गर्दै ठूला ब्यानरका व्यक्तिले आफूलाई दु’ब्र्य’वहार गरेको आरोप लगाएकी थिइन् ।
उनले त्यसमा कसैको नाम भने उल्लेख गरेकी थिइनन्। उनको सो भिडियोमा प्रतिकृया दिँदै भुवन केसीले ‘जुन थालमा खायो त्यही थालमा प्वाल पार्ने’ भन्दै सामाजिक सञ्जाल मार्फत नै प्रतिकृया दिए । भुवनको यस्तो प्रतिकृया आएपछि साम्राज्ञीले उनको नामै तोकेर जापानमा एक अवार्ड कार्यक्रमका क्रममा आफुलाई दु’ब्र्य’वहार गरेको भन्दै अर्को भिडियो जारी गरेकी छन्।
नेपाली फिल्म क्षेत्रमा पनि अग्रज कलाकारले नयाँ कलाकारलाई शो’षण गर्ने गरेको प्रशंग बेलाबेलामा आउने गरेको छ । तर कसैले पनि आफु माथि यस्तो ब्यवहार भएको खुलेर बताउन सकेका थिएनन् । तर साम्राज्ञीले भने आफु माथि भएको दु’ब्र्य’वहारका बारेमा खुलेर बोलेकी छन् ।
अभिनेत्री साम्राज्ञीले आफूलाई सुटिङ स्थलमै अ’श्लील गा’लीसमेत गरेको भनेर भिडियो सार्वजनिक गरेकी छन् । भुवन केसीले त्यसमा पनि प्रतिकृया जनाएपछि साम्राज्ञी थप खुलेर आएकी छन् । उनले आफुले फिल्म क्षेत्रका बारेमा यस्तो भन्नुपर्ने अवस्था ल्याउने नै भुवन भएको बताएकी छन् ।
साम्राज्ञीको नाम नलिईकन अभिनेता केसीले आइतबार राति फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘खान नपाएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा रो’ई कराई गर्ने हिरोइन अहिले कुन फिल्मको नाम बेचेर खाइरहेकी छिन् ? जुन थालमा खाने त्यही थालमा दु’लो पार्ने ! सामाजिक सञ्जालमा गर्ने बराबर अभिनय फिल्ममा पनि गरे हुने नि !!’
भुवन केसीको यो स्टाटस पछि साम्राज्ञीले भुवनको नाम नै तोकेर आफुलाई जापानको कार्यक्रममा भुवनले दु’ब्र्य’वहार गरेको बताएकी छन् । उनले भिडियोमा आफूलाई सुटिङका बेला त्यो व्यक्तिले मुखमै आएर कुरा गर्ने गरेको उल्लेख गरेकी छन् । उनले भनेकी छन्, ‘एक जनाले के भन्नुभएको छ भने जुन थालमा खायो त्यही थालमा दु’लो पार्ने। उहाँले मलाई राम्रो व्यवहार गर्नुहुन्थ्यो भने त्यो ठाउँ आउँथेन। यो अवस्था आएको नै उहाँले गर्दा हो।’
‘त्यो स्ट्याटस लेख्ने व्यक्तिले जापानमा अवार्ड कार्यक्रम हुँदा नै बाबा हेर तँ त मेरो प्रोडक्ट हो। त्यो पुरानो कुरा को’ट्या’एर के फाइदा। यस्तो कुराहरू नगर भनेर मलाई सम्झाउनु भयो,’ उनले अगाडी भन्छिन् , ‘भित्र मलाई घि’न लागिरहेको थियो। त्यो कुरा गर्दा पनि टाँ’स्सि’एर, फेरि त्यही व्यवहार। त्यही प’रभ’र्ट व्यवहार। गालामै मुख ल्याएर बोलिरहेको थियो। उहाँलाई अंकल भनेको पन पर्दैन। हस दाइ भन्दै ध’के’लिदिएँ। म जे बोल्दै छु यो सबै सत्य हो।’
उनले यसो भनिरहँदा आफुले अहिले पनि यो कुरा सार्वजनिक गरेर ठिक गरेँ की बेठिक भन्ने महशुष गरिरहेको बताइरहेकी छन् । आफु माथि भएको दु’ब्र्य’वहारको बारेमा थाहा हुँदा पनि अन्य कलाकारले महिला भएका कारण यस्ता कुरा बाहिर ल्याउँदा ‘भुवनलाई भन्दा तिमीलाई नै असर गर्छ भनेर मलाई सम्झाए । त्यती बेला म सानै थिए । यस्ता कुरा थाहा पनि थिएन । त्यसैले सहेर बसें उनले भनेकी छन्, तर अहिले पनि यसवाट के असर गर्छ मलाई थाहा छैन । तर मलाई हल्का महशुष भने भइरहेको छ।’
पाल्पा दे’खि का’ठमा’ण्डौ आ’एकी मि’नाले दे’ख्ने जति सबै’लाई च’कित पा’रिन् हेर्नुहोस् (भिडियो)
यो हो १९ बर्षिय युवतिले बनाएको ब’ला’त्का’र हुनबाट बचाउने पे’न्टी,जसले पुलिसलाई आफै फोन लगाउछ (भिडियो)
राजा फर्के पछि कुलमानलाई प्रधानमन्त्री बनाउने,यस्तो छ दरबारको तयारी
अन्माएकी बेहुली बेहुलाको घर जान नमानेपछी बेहुलाले आँफै रुँदै बोकर लगे (भिडियो सहित)